Isbedel maamul oo maanta Muqdisho ka dhacay iyo mas'uul xilka laga qaaday - Caasimada Online
Home Warar Isbedel maamul oo maanta Muqdisho ka dhacay iyo mas’uul xilka laga qaaday
Isbedel maamul oo maanta Muqdisho ka dhacay iyo mas’uul xilka laga qaaday
Muqdisho (Caasimada Online) – Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa Magaalada Muqdihso Eng. C/raxmaan Cumar Cismaan (Yariisoow) ayaa maanta xil ka qaadis ku sameeyay Gudoomiyihii Degmada Hodan Maxamed Axmed (Cantoobo).
Guddoomiye Cantoobo oo xilkan laga qaaday ayaa la magacaabay 23-Kii Bishii May ee Sanadii 2017.
Gudoomiyaha Gobolka Banaadir wali ma soo magacaabin shaqsiga badali lahaa Maxamed Axmed Cantoobo oo mudo xilka Degmada Hodan hayay.
Waloow warar soo baxaya ay sheegayaan in Magacaabista lala sugayo Gudoomiyayaal kale oo xilka laga qaadayo Maalmaha soo socota.
Maxamed Axmed Cantoobo ayaa waxaa sidoo kale loo Magacaabay in uu noqdo Agaasimaha guud ee Arrimaha Bulshada ee maamulka gobolka Banaadir,kaas oo uu horay u haayey Saalax Xasan cumar oo isna maanta loo Magacaabay Afhayeenka Maamulka gobolka Banaadir.
Dhinaca kale, Xafiisyada Hogaanka sare ee Gobolka Banaadir ayaa aad mashquul u ah waxaana buux dhaafiyay Sooyaalka Shaqsiyaad doonaya iney xilal ka qabtaan Degmooyinka Gobolka Banaadir, iyo Dowladda Hoose.